ပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင် Sharp ကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်: 'လေကြောင်းဆိုင်ရာတူရကီရဲ့မျက်နှာ flux' - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြည်နယ်လေဆိပ်များအာဏာပိုင် Sharp က: 'လေကြောင်းဆိုင်ရာတူရကီရဲ့မကျြနှာကို flux' '
09 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
ချွန်ထက်လေကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်း turkiyenin တစ်ဦးမျက်နှာ dhm အထွေထွေမန်နေဂျာ
လေယာဉ်များ၏စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း၏ပထမဦးဆုံး 2019 လအတွင်းပြည်နယ်လေဆိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှ General Manager Hüseyin Keskin, 8, ဝန်စာရင်းဇယားများ၏ခရီးသည်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်အသစ်များ၏ခွဲဝေမှု, "လေကြောင်းဆိုင်ရာ '' ဦးဆောင်ကဏ္ဍ ဟူ. ပါရှိသည်တူရကီရဲ့မကျြနှာကို flux ဖြစ်နေဆဲပါ" ဟုသူကဆိုသည်။
အထွေထွေမန်နေဂျာHüseyin Keskin, တွစ်တာအကောင့်ယခုနှစ် 2019 လေယာဉ်ပျံအဲယားဝေး၏ပထမရှစ်လကြာ, သူတို့ရဲ့ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးစာရင်းဇယား shared ။
တူရကီအမျိုး၏မာနဖြစ်ဆက်လက်အဖြစ်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး '' ဦးဆောင်ကဏ္ဍ '၌အဘယ်မှာရှိနီးပါးသုံးခြံတိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကို၏ "မနှစ်က 10 လေကြောင်းလိုင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်အသွားအလာ။ လေယာဉ်ခရီးသည်နှင့်ဝန်စာရင်းဇယား '' သြဂုတ်လကောင်းကြီးမင်္ဂလာများလေကောင်းလေ '' ၏တနှစ်နှင့်လေကြောင်းသြဂုတ်လ 2019 နှစ်ပေါင်း၏ပထမဦးဆုံးရှစ်လအတွင်းကျွန်တော်တစ်ဦးကအလွန်ကောင်းတဲ့စားပွဲပေါ်မှာမှညွှန်ပြဖော်ပြနိုင်ပါ။ သန်း 23 262 843 တထောင်လေဆိပ်, ခရီးသည်သြဂုတ်လအတွင်းကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ ရှစ်လတာကာလအတွင်းတိုက်ရိုက်ကူးအပြောင်းခရီးသည်နှင့်အတူစုစုပေါင်းခရီးသည်အသွားအလာတထောင် 140 121 303 သန်းစုစုပေါင်း "
ပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင်Hüseyin Keskin ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖို့တာဝန်! Hüseyin Keskin ဘယျသူနညျး 27 / 07 / 2019 ပြည်နယ်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဥက္ကဋ္ဌHüseyin Keskin ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအညီHüseyin Keskin ရေတွက် "25 ၏ပြည်နယ်လေဆိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအထှထှေညွှန်ကြားမှုနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ, 2019 နှင့် 30842 တတိယ 233 အတွက်အမိန့်xnumx'ıncဆောင်းပါးအားဖြင့်သမ္မတအမိန့်ရက်စွဲပါ:6ဇူလိုင်လ3ရက်စွဲပါ2ဆိုပါတယ်တရားဝင်သမ္မတအမိန့်ဟာပြန်တမ်းထုတ်ဝေရေတွက် သူကတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ " Hüseyin Keskin WHO က? အထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရပြီးနောက် Pertevniyal သင်္ချာ Sharp က, Marmara တက္ကသိုလ်, Business Administration အတွက်မာစတာဘွဲ့၏Boğaziçiတက္ကသိုလ်ဦးစီးဌာနမှာမိမိဘွဲ့ကြိုလေ့လာမှုများပြီးစီး။ Sharp ကစာရင်းကိုင်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးလယ်ပြင်၌မိမိပါရဂူလေ့လာမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်။ လေကြောင်း ...
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Panel ကို၏ပြဌာန်းချက်များတွင် OMSAN မှ General Manager Assessment ကဏ္ဍ 01 / 03 / 2018 ၏အဖွဲ့အစည်းအတွင်း Finansbank ၏ QNB မှ General Manager မှာ Supply Chain Management ကိုအသင်း (ကို TED) "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက် & Emerging Trends, ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အလားအလာများ" ဟု panel ကဆွေးနွေးမှုကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍသက်ဆိုင်သူများ၏ပြင်းထန်သောပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပသည့် panel ကို, ကို TED ၏ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Siemens တူရကီ၏ Chairman ဦးစီးဌာနမှထောက်ပံ့ရေး၏ Chain စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာ Tugrul Günalအဖွင့်မိန့်ခွန်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ Z ကို Inc ကိုတို့ကတည်းဖြတ် လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ကို TED panel ကိုတက်ရောက်ခြင်းဒါရိုက်တာများဘုတ်အဖွဲ့၏ဒုတိယသမ္မတRessamoğlu Alba ရဲ့ OMSAN မှ General Manager Assoc ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒေါက်တာ အမ် Hakan Sharp က, Ekol ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဥက္ကဋ္ဌ Ahmet မိုဆူးလ်နှင့် Borusan ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမှ General Manager အီဘရာဟင်Dölenတူရကီအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏ပြည်နယ်နှင့်ကမ္ဘာ ...
ပြည်နယ်လေဆိပ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းအာဏာပိုင်အထွေထွေမန်နေဂျာ Mus လေဆိပ်အပေါ်လေ့လာသုံးသပ်ရန်ခဲ့သည် 10 / 08 / 2018 ပြည်နယ်လေဆိပ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေး (Sama) မှ General Manager Funda, လေဆိပ် Terminal ကိုအဆောက်အဦး၏Muş Alparslan ဆူလ်တန်ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဇန်နဝါရီလမှ General Manager, Muş Alparslan Sultan လေဆိပ် Terminal ကိုအဆောက်အဦး၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်နှင့်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးဇန်နဝါရီလစာမေးပွဲကာလ, အလုပ်၏အထူးကြပ်မတ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်ဟုသူကဆိုသည်။ အဆိုပါလုပ်သားများသူတို့နိုငျခဲ့ကွတအဖြစ်အားလုံးဇန်နှင့်အတူအုပ်ချုပ်ရေးခြင်းဖြင့်အလုပ်ရှင်သူတို့က, သူကပြောသည်အတူတကွအလုပ်လုပ်သောရှင်းပြ။ hunky တစ်လမ်းအတွက်ကိုအဆငျ့မွငျ့အတွက်အောက်တိုဘာလအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဤလုပ်ငန်းကိုခံရလိမ့်မည် "ဘုရားသခဆန္ဒရှိမစ္စတာနိုင်ငံတော်သမ္မတဒီမှာ 100 ရက်ကြာစီမံကိန်းကို 'ဆူလ်တန် Alparslan လေဆိပ်' '၏အမည်ဖြစ်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာ ကပြောင်းလဲသွားတယ်။ ...
ပြည်နယ်လေဆိပ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအာဏာပိုင်အထွေထွေမန်နေဂျာ Funda ဇန်နဝါရီလနှုတ်ဆက်နာရီ
တူရကီ Lighting ကဏ္ဍ, နိုင်ငံတကာကစားသမားအတူတကွ Get နှင့်အတူကဏ္ဍıstanbullight
ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့တရုတ်မီးရထား (ဓာတ်ပုံပြခန်း) တွင်ရာနှင့်ချီသောလူများကသန်းပေါင်းများစွာ၏ခဲ့ရတယ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (177) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)